Internet ဆိုင်ပိုင်ရှင်တွေအတွက်ပါ [Problem]
Myanmar IT Resource Forum » GENERAL TECHNOLOGY » » Internet Knowledge » Internet ဆိုင်ပိုင်ရှင်တွေအတွက်ပါ [Problem]
1 Internet ဆိုင်ပိုင်ရှင်တွေအတွက်ပါ [Problem] on 1st May 2010, 11:23 am
internet ဆိုင်မှာလာသုံးတဲ့သူတွေကသူတို့သုံးတဲ့စက်ထဲမှာဆိုင်ပိုင်ရှင်မသိအောင် software လေးတွေ run သွားတတ်ကြတယ်(ဥပမာ..keylogger လိုမျိုးလေးတွေပေါ့ ) အဲဒါတွေကဆိုင်ပိုင်ရှင်တွေအတွက်အကျိုးယုတ်စေပါတယ်
အဲဒီလို ဆိုင်ရှင်မသိပဲ software တစ်ခုမှ run လို့မ၇အောင် လုပ်လို့၇နိုင်မလား ၇တယ်ဆို၇င်လဲဘယ်လိုလုပ်၇တယ်ဆိုတာသိချင်လို့ပါ
[You must be registered and logged in to see this image.] p.s ......internet ဆိုင်ပိုင်ရှင်တစ်ယောက်ကမေးတာကျွန်တော်လဲမသိလို့ ဒီ ဖို၇မ်ပေါ်တင်ပေးလိုက်တာပါ ဟဲဟဲ [You must be registered and logged in to see this image.]
2 Re: Internet ဆိုင်ပိုင်ရှင်တွေအတွက်ပါ [Problem] on 2nd May 2010, 2:25 pm
Deep Freeze ဆိုတဲ့ software ကို သုံးပါ။
ဟောဒီမှာ download လုပ်နိုင်ပါတယ်။
3 Re: Internet ဆိုင်ပိုင်ရှင်တွေအတွက်ပါ [Problem] on 2nd May 2010, 6:02 pm
GP & Registry ထဲကလဲ ပိတ်လို့ ရတယ်ဗျ.
ကျနော်မေ့သွားလို့ ..ပြန်ရှာတာလဲ မတွေ့ သေးဘူးဖြစ်နေတယ်
4 Re: Internet ဆိုင်ပိုင်ရှင်တွေအတွက်ပါ [Problem] on 6th May 2010, 1:14 pm
Every heart beat is for learning.
ကိုထက်နိုင်ပြောသလို Deepfreeze software ကိုသုံးရင်လည်းကောင်းတာဘဲ
ကျွန်တော် ဆိုင်တဆိုင်မှာ မြင်ဘူးတာကတော့ HD Card သုံးတာတွေ့ဘူးတယ်
HD Card သုံးထားရင် Restart လုပ်လိုက်ရင် တင်ထားတဲ့ Software တွေတခုမှ မရှိတော့ဘူးဗျ..
5 Re: Internet ဆိုင်ပိုင်ရှင်တွေအတွက်ပါ [Problem] on 6th May 2010, 4:41 pm
ဟဲဟဲ ဒါနဲ့ HD Card ဆိုတာဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတာလေးပါပြောပြပေးပါလား ကိုထက်ေ၇....
6 Re: Internet ဆိုင်ပိုင်ရှင်တွေအတွက်ပါ [Problem] on 6th May 2010, 6:22 pm
ကျွန်တော်လည်း အင်တာနက်ဆိုင်တစ်ခုမှာ exe ဖိုင်တွေ ဘာမှ run လို့မရဘူး။ ဒါပေမယ့် သူက ပေးသုံးမယ့်ဟာတွေကို ပုံလေးတွေကို Tab တစ်ခုချင်းဆီခွဲထားထားတယ်။ အဲဒါ ကျတော့ရော။ ဆိုင်နာမည်တော့ မေ့သွားပြီ။ လမ်းမတော် ၁၃လမ်းနားကလား မသိဘူး။
7 Re: Internet ဆိုင်ပိုင်ရှင်တွေအတွက်ပါ [Problem] on 6th May 2010, 9:24 pm
အေးဆေးလူ wrote: ဟုတ်ကဲ့ ရှင်းပြပေးတဲ့အစ်ကိုတွေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်
HD Card မဟုတ်ဘူးခင်ဗျ.... HD Guard လို့ ခေါ်တာပါ.....
အကိုရဲ့ စက်ကို HD Guard တင်လိုက်တာနဲ့... အဲဒီကောင် က window တစ်ခုလုံးကို backup လုပ်ထားပါတယ်.....
HD Guard တင်ပြီးတာနှင့် အကို ရဲ့ စက်ကို ဘယ် software ပဲ install လုပ်လုပ် နဂို backup လုပ်ထားတဲ့ အခြေအနေ အတိုင်းပဲ ပြန်တက်ပါတယ်.... ရှင်းရှင်းပြောရရင် save လုပ်ထားတဲ့ Data ကအစ ရှိမှာ မဟုတ်ဘူး......
virus ၀င်တယ်လို့ ထင်ရင် restart ချလိုက်
အရင်အခြေအနေတိုင်းပဲ ပြန်တက်တာ ပါ....
Defreeze နဲ့ အတူတူပါပဲ....
[You must be registered and logged in to see this image.] ကျနော် ရွှီးလိုက်ပြီနော် [You must be registered and logged in to see this image.]
8 Re: Internet ဆိုင်ပိုင်ရှင်တွေအတွက်ပါ [Problem] on 6th May 2010, 9:26 pm
SilentHill wrote: ကျွန်တော်လည်း အင်တာနက်ဆိုင်တစ်ခုမှာ exe ဖိုင်တွေ ဘာမှ run လို့မရဘူး။ ဒါပေမယ့် သူက ပေးသုံးမယ့်ဟာတွေကို ပုံလေးတွေကို Tab တစ်ခုချင်းဆီခွဲထားထားတယ်။ အဲဒါ ကျတော့ရော။ ဆိုင်နာမည်တော့ မေ့သွားပြီ။ လမ်းမတော် ၁၃လမ်းနားကလား မသိဘူး။
အချို့ ဆိုင်တွေ က exe တွေ run လို့မရအောင် registry မှာ ပိတ်ထားတယ် အကို... customer ကို software installation ပေးမလုပ်တဲ့သဘောပေါ့ဗျာ..... ဒါပေမဲ့ thumb drive ထဲကနေ install လုပ်ရင်တော့ run တယ် ....
9 Re: Internet ဆိုင်ပိုင်ရှင်တွေအတွက်ပါ [Problem] on 7th May 2010, 12:00 pm
မှန်ပါတယ်အကိုရယ် ကျနော်ဆိုင်မှာ အရင်ကDefreezeတင်ထားတယ် ခုတော့အဲကောင်က password remover တွေနဲ့ ဖျတ်လို့ရလို့ HD Guardကို တင်ထားတယ်
လုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေကတော့တော်တော်စုံတယ် အသေးစိတ်လေးသိတဲ့သူရှိရင် ပြောပြပေးပါအုံးခင်ဗျာ
10 Re: Internet ဆိုင်ပိုင်ရှင်တွေအတွက်ပါ [Problem] on 7th May 2010, 12:14 pm
HD Card မဟုတ်ဘူးခင်ဗျ.... HD Guard လို့
အကိုရဲ့ စက်ကို HD Guard တင်လိုက်တာနဲ့... အဲဒီကောင် က
window တစ်ခုလုံးကို backup လုပ်ထားပါတယ်.....
တင်ပြီးတာနှင့် အကို ရဲ့ စက်ကို ဘယ် software ပဲ install လုပ်လုပ် နဂို
backup လုပ်ထားတဲ့ အခြေအနေ အတိုင်းပဲ ပြန်တက်ပါတယ်.... ရှင်းရှင်းပြောရရင်
save လုပ်ထားတဲ့ Data ကအစ ရှိမှာ မဟုတ်ဘူး......
ထင်ရင် restart ချလိုက်
Sorry အကိုတို့ရေ ကျွန်တော် လောလော လောလောနဲ့ ရေးလိုက်တာမှားသွားတယ်..ဟီး [You must be registered and logged in to see this image.]
Card နဲ့ Guard ကို....ဆောရီးဗျာ..ထပ်ပီးတော့တောင်းပန်တယ်..
ကျွန်တော့ ကိုယ်စားရှင်းပြပေးလိုက်တဲ့ အကိုများကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။။ [You must be registered and logged in to see this image.]
11 Re: Internet ဆိုင်ပိုင်ရှင်တွေအတွက်ပါ [Problem] on 7th May 2010, 5:48 pm
ကျွန်တော် လည် စိတ်ဝင်းစားလို့ အဲ့ဒီ ဆော့ဝဲလ်လေး ရှိရင် မျှ ကြပါအုံး နော် ကိုဆိုလာကိုကို ဆီ မှာ ရှိဘူးလာ
12 Re: Internet ဆိုင်ပိုင်ရှင်တွေအတွက်ပါ [Problem] on 7th May 2010, 5:56 pm
ကျွန်တော်လည်း လိုချင်တယ်ဗျို့။ [You must be registered and logged in to see this image.]
13 Re: Internet ဆိုင်ပိုင်ရှင်တွေအတွက်ပါ [Problem] on 8th May 2010, 1:51 pm
HD Guard လိုချင်တဲ့ ကိုကိုများ ဒီလင့်မှာသွားကြည့်လိုက်နော်..
hd guard 3.0 at Free Downloads Center
လို့တော့ရေး ထားတာဘဲ.. [You must be registered and logged in to see this image.]
14 Re: Internet ဆိုင်ပိုင်ရှင်တွေအတွက်ပါ [Problem] on 8th May 2010, 2:39 pm
နောက်တစ်မျိုးရှိသေးတယ် Recovery Card
Hardware အနေနဲ့လာတာ PCI Slot မှာ စိုက်သုံးရတာ
15 Re: Internet ဆိုင်ပိုင်ရှင်တွေအတွက်ပါ [Problem] on 8th May 2010, 3:07 pm
ကိုကျော်စွာသန့်ရေ ဘယ်လိုသုံးရတာလဲ သူ့အကျိုးကျေးဇူး ကဘယ်လိုမျိုးလဲဆို တာ အသေးစိတ်လေးပြောပြပေးပါလားဗျာ..သိချင်လို့ပါ..
16 Re: Internet ဆိုင်ပိုင်ရှင်တွေအတွက်ပါ [Problem] on 12th June 2010, 11:35 am
defreeze သုံးတာပြသနာတော့ရှိတာပဲ desktop ပေါ်က save သမျှတွေ ပျက်ကုန်တယ်
17 Re: Internet ဆိုင်ပိုင်ရှင်တွေအတွက်ပါ [Problem] on 12th June 2010, 12:13 pm
deepfreeze ပါဆို။ အဲလိုဖြစ်စေချင်လို့ တင်တာမဟုတ်ဘူးလား။
18 Re: Internet ဆိုင်ပိုင်ရှင်တွေအတွက်ပါ [Problem] on 12th June 2010, 2:38 pm
meengelay wrote: defreeze သုံးတာပြသနာတော့ရှိတာပဲ desktop ပေါ်က save သမျှတွေ ပျက်ကုန်တယ်
Save လုပ်ဖို့ နေရာသတ်သတ်လုပ်ထားလိုက်လေ။ ပြီးရင် အဲ့ဒီအပိုင်းကို Deep Freeze နဲ့ protect မလုပ်ထားနဲ့ ပေါ့။
ကျွန်တော်သုံးနေကျ အင်တာနက်ဆိုင်မှာဆို အဲ့လိုလုပ်ထားတယ်။
19 Re: Internet ဆိုင်ပိုင်ရှင်တွေအတွက်ပါ [Problem] on 12th June 2010, 4:52 pm
20 Re: Internet ဆိုင်ပိုင်ရှင်တွေအတွက်ပါ [Problem] on 12th June 2010, 8:23 pm
ko htet wrote: ဘယ်လိုလုပ်ရတယ်ဆိုတာရှင်းပြပေးပါလားဟင်
install လုပ်ကထဲက protect မလုပ်မယ့်နေရာကို ရွေးပေးရတယ်။ Windows မရှိတဲ့အပိုင်းကိုရွေးပေးလိုက်ပေါ့။
21 Re: Internet ဆိုင်ပိုင်ရှင်တွေအတွက်ပါ [Problem] on 12th June 2010, 10:22 pm
DeepFreeze က ချုပ်မယ့်အပိုင်း(C:)ကို အမှန်ချစ်ကလေးပေး
မချုပ်မဲ့အပိုင်း(D:) ဒေတာသိမ်းမယ့် အပိုင်းကို
22 Re: Internet ဆိုင်ပိုင်ရှင်တွေအတွက်ပါ [Problem]